Ameerikaan Chaayinaa irra qoqqobbii keette - NuuralHudaa
Magaalaa Baddeeysaatti Ulamoota fi Imaamota masjidaatiif leenjiin Keenname
Magaalaa Baatuutti Sagantaan Da’awaa fi Aalima qubsiisuu geggeeffame
Godina Salaalee anaa Dharraatti Koreen Majlisaa haarayatti hundaayuu gabaafame
Manni Marii Dhimmoota Islaamaa Ityoophiyaa Sagantaa Deeggarsa Muslimoota Magaalaa Mooxaatiif geggeessaa ture milkiin xumuruu beeksise
Turkiyaan Waraana Mootummaa Suuriyaa rukutuu kan itti fuftu tahuu akeekkachiifte
Manni Marii Godina Silxee, Gaaffii Ummanni Silxee Godinichi akka naannoo tahuuf dhiheesse sagalee guutuun dabarse
Hoggantoonni Biyyoota Gamtaa Afrikaa Karooraa Traamp dhimma Baha Jiddu Galeessaa ilaalchisee baase kan hin deeggarre tahuu ibsan
Home/Odeeyfannoo/Eeshiyaa/Ameerikaan Chaayinaa irra qoqqobbii keette
Mootummaan Ameerikaa ‘Yukreen weeraruufi Filannoo Ameerikaa keessa harka naqachuu’ sababaa jedhuun Raashiyaa irra qoqqobbii kaayee ture.
Haa ta’u malee Chaayinaan qoqqobbii Ameerikaan Raashiyaa irra keette kana cabsuudhaan, dhiheenya kana Jeettii waraanaa 10 fi Ittisa misaa’elaa S-400 jedhamu Raashiyaa irraa kan bitte yoo tahu, Kanuma hordofuun Ameerikaan kaampaaniiwwan Chaayinaa kan meeshaa waraanaa oomishuudhaan beekkamanii fi qondaaltota tikaa 33 kanneen bittaa meeshaa waraanaa kana raawwachiisan irra qoqqobbii cimaa keettee jirti.
Turkiyaa fi Indiyaan Ittisa misaa’elaa S-400 jedhamu kana bitachuudhaaf Raashiyaa waliin waliigaltee kan xumuran yoo tahu, qoqqobbiin Ameerikaan Moskoo irra keette kun walii galtee kana kan danqe tahuu gabaasni Aljaziiraa ni addeessa.
Chaayinaan Juma’aa har’aa ibsa baasteen, Ameerikaan qoqqobbii kana hatattamaan yoo kan hin kaasne tahe, tarkaanfii cimaa fudhachuun haloo kan baatu tahuu akeekkachiiste. Raashiyaan gama isiitiin Ameerikaan gabaa meeshaa waraanaa keessaa nu baasuudhaaf yaalaa jirti, kun ammoo “ibiddaan taphachuudha” jette.
Baha Jiddu-Galaa Chaayinaa Raashiyaa